Nduku na-eto eto nke mpaghara Kursk - magazin "Usoro nduku"
Ókèala mpaghara: 29,997 puku kilomita2.
Ọnụ ọgụgụ: 1 117 378 ndị mmadụ, nke 66,88% bụ ndị bi n'obodo.
Ọnọdụ ala: mpaghara a dị n'etiti etiti Europe n'akụkụ Russia, bụ akụkụ nke Central Federal District.
Ihu Igwe: ọnọdụ ala dị jụụ, nke nwere udu mmiri na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ, nke dịkarịsịrị mkpụmkpụ ma dịkwa nwayọ. Jenụwarị bụ ọnwa oyi kacha oyi. Oge nke oge ahụ nwere ọnọdụ okpomọkụ dị mma kwa ụbọchị bụ ụbọchị 235 kwa afọ na ndịda ọdịda anyanwụ na ụbọchị 220 na mgbago ugwu na ọwụwa anyanwụ nke mpaghara ahụ. Ole mmiri ozuzo zuru oke iji hụ na nnukwu mkpụrụ nke ihe ubi. Agbanyeghị, ọdịda na-ejighị n'aka ma kesaa n'ụzọ na-enweghị isi na mpaghara oge na oge. A na-ahụ mmiri ozuzo na ifufe kpọrọ nkụ afọ ụfọdụ.
Ahụ efe ahụ. Mpaghara mpaghara a dị na mkpọda nke ndịda ọdịda anyanwụ nke Central Russian Upland, ugwu nke elu ya dị elu nke 177-225 dị elu karịa oke osimiri ma na-efepu ya na ndagwurugwu, ọtụtụ mmiri na oke osimiri.
Ala. Ala ojii na-emeri na mpaghara (74% nke mpaghara ahụ), ihe ndị ọzọ bụ sọlfọ ọhịa (isi awọ, isi awọ na isi awọ).
Mpaghara ala ubi: 2 hekta 146, ma ọ bụ 72% nke ala niile dị na mpaghara ahụ, ala ubi - 1 628 puku hectare, ma ọ bụ 54%.
Akụkụ ọrụ ugbo ka bụ akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba mpaghara Kursk. Ewuputala usoro ohuru ohuru nke ugbo eji eme ihe nke oma, teknụzụ iji chekwaa uzo, nkpuru nkpuru na umu anumanu ka etinyere n’ime ogugu ulo oru mpaghara a.
N'iji ntọala ahụ eme ihe, mpaghara agro-ụlọ ọrụ nke mpaghara ahụ ọ bụghị nanị guzosiri ike na otu onye isi nke Central Federal District na ịkụ azụta ihe niile dị mkpa nke ịkọ ugbo, mana ọ ghọkwara otu n'ime ndị na-emepụta ihe kachasị na Russian Federation niile.
Dabere na atụmatụ nke mbido, mmepụta nke nnukwu ihe ọkụkụ na ụlọ ọrụ aka nke ụdị niile na 2014 bụ 99 ijeri rubles. Organizationstù ndị ọrụ ugbo na-ekwupụta pasent 62,5 nke mmepụta ọrụ ugbo. Ndepụta nke usoro ọrụ ugbo sitere na pasent 113,7, nke bụ pasent 5,9 karịa karịa ka ezubere.
N'afọ 2014, emepụtara nduku 944 puku tọn poteto na 142 puku tan nke akwụkwọ nri, nke na-egboju afọ ole ihe dị n’ogbe mpaghara n’ọrụ a.
Mmụba nke ihe ọkụkụ na owuwe ihe ubi nke ihe ọkụkụ ka a nwetara site na iji teknụzụ ọgbara ọhụrụ na ighapụta igwe na ụgbọ njem. Na 2014, ndị na-akọ ugbo n’ubi a zụtara traktị 302 ọhụrụ, ọka 118 na ndị na-ewe ihe ubi, yana ọtụtụ ngwa ọrụ ugbo ndị ọzọ dị elu ruru ijeri 3,6 rubles.
Mpaghara Kursk bụ otu n'ime mpaghara na -ewepụta ụdị nduku ọdịnala. N'ihe banyere usoro ịkụ, ihe ọkụkụ a na-ewere ọnọdụ nke atọ na mpaghara mgbe ọka ọka na beets. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, enwere mmasị na nduku site na ụlọ ọrụ ntinye ego nke ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ugbo, ụlọ ndị ọrụ ugbo (onye ọrụ ugbo) amụbawo nke ukwuu. Ntinye uche dị otú a bụ n'ihi agrotechnike nke ọdịbendị dịka onye bu ụzọ na ntụgharị mkpụrụ, yana oke arụmọrụ akụ na ụba nke mmepụta. Dika onu ogugu ndi okacha mara nke kompeni nke ulo oru agro a na - eme ka ogha ahu puta ihe puru ime ihe ruru puku iri ma o bu karia.
Kemgbe afọ 2011, ka emeputara Ọkụ Nduku. Taa, ugbo na-akọ poteto na mpaghara karịrị narị hekta 300. Ihe oru ngo a na-enye nhazi nke usoro mmepe, ịchekwa ihe, tupu ere ere na ibubata nduku na ụlọ ọrụ nhazi. A na-ere ahịa na mkpụrụ nduku.
LLC "Ihe nchebe"
Ọ bụ akụkụ nke EkoNiva-APK, otu n'ime ndị na-emepụta mkpụrụ akụ kachasị ukwuu na Russia. Kwa afọ, ụlọ ọrụ ugbo nke ụlọ ọrụ na-enweta mkpụrụ ọka ruru iri, mkpụrụ osisi, ahịhịa na poteto. Mmepụta mkpụrụ na-agụnye ụdị dịgasị iche iche nke Russian, Ukraine, German, French, Scandinavian na Canadian. Zashchitnoye LLC na-akụ mkpụrụ poteto na mpaghara hectare 20.
NSỌPR. IME AKUKO
Ọrụ ngwa ngwa nke mpaghara nduku mpaghara taa bụ ịbawanye mkpụrụ. Ebumnuche bụ isi bụ ime ka mpaghara ahụ bụrụ otu n'ime ndị isi na mpaghara maka mmepụta na nhazi nke ọdịnala dị mma na nke bara uru, ebe ọ bụ na ọnọdụ niile dị maka nke a. Ọ bụghị ihe ndabara na ala ndị obodo nwere mmasị dị ukwuu nye ndị na-etinye ego si mba ọzọ.
N’ọnwa Juun n’afọ 2015, n’oge ọgbakọ Central Russian Economic na Kursk, ụlọ ọrụ China Morn Group gosipụtara Gọọmentị nke mpaghara Kursk otu ọrụ maka itolite ma na-ahazi poteto tinyere ego dị $ 20-25. Ndị ọkachamara na China na-eme atụmatụ ịkọ ihe ruru 7,5 puku tọn poteto kwa afọ na ala ojii Kursk. Ọzọkwa, Morn Group ga-achọ iwu ala stachi na mpaghara Kursk nwere ikike nke puku tọn 1,2. Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ahụ na-atụ anya inweta nsonaazụ mbụ nke oru a site na 2017.
Vladimir Bychikhin - nduku na-esi na Kursk dịpụrụ adịpụ
Onye oru ubi Vladimir Bychikhin si na mpaghara Oboyanskiy nke mpaghara Kursk na 2013 natara enyemaka nke 1,2 nde rubles maka mmepe nke azụmahịa ya nduku. Ọ ghọrọ onye so na mmemme ebumnuche "Nkwado maka ndị ọrụ ugbo novice na mmepe nke anụ ụlọ ezinụlọ na-adabere n'ugbo ndị ọrụ ugbo (nkeonwe) maka 2013-2015".
Agbanyeghị na ego a abụghị ego ebido, o nyeere onye ọrụ ugbo aka ịkwụsi ike na ụkwụ ya, iwebata echiche ya. Ọtụtụ afọ gara aga ọ malitere na obere ubi. Taa, nduku nduku nke Vladimir Bychikhin karịrị 40 hectare.
Ahịhịa nduku nke ndị ọrụ ugbo na-akọ na-achọsi ike. Ugboro ole o were nduku ya gaa na mpaghara etiti, ọtụtụ oge ka azụtara ya ozugbo. Vladimir Bychikhin ji n'aka na afọ a agaghị abụ iche.
Nkwado steeti ahụ dịkwa mkpa maka onye ọrụ ugbo iji kwụọ ụgwọ maka mkpụrụ ndị na-amị mkpụrụ na ime ka akụ na ụba na-aga n'ihu.